I-VzLinux, enye i-distro ethembisa ukuthi izothatha indawo efanelekile yeCentOS | Kusuka kuLinux
Inkampani I-Virtuozzo (phambilini okwakuwukuhlukaniswa kokufana), okuthuthukisa isoftware yokwenza ngekhono kuseva kumaphrojekthi womthombo ovulekile, umemezele ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ukuqala kokusabalalisa okusha kusuka kuLinux, ebizwa "VzLinux", ebikade isetshenziswa njengohlelo olusebenzayo olusungulwa yipulatifomu yokwenza izinto kanye nemikhiqizo ehlukahlukene yezentengiso.
Kusukela manje kuqhubeke, i-VzLinux itholakala kuwo wonke umuntu futhi ibekwe esikhundleni seCentOS 8, isilungele ukuthunyelwa kokukhiqiza.
I-Virtuozzo inomlando omude uxhasa futhi unikela kumaphrojekthi wemithombo evulekile yamukelwa njenge-OpenVZ, KVM, Docker, OpenStack, CRIU. Ukuthembela kwenkampani ekusatshalalisweni kwayo kwe-VzLinux kuholele ekuguqulweni kwangaphakathi kwamaseva angaphezu kwe-200 CentOS, okuqinisekisa ukuthi ingqalasizinda yeVirtuozzo ingubufakazi besikhathi esizayo ngaphesheya kukaDisemba 2021, lapho i-CentOS ihlelelwe ukuphela.
Kuyiphayona emkhakheni, othuthukise ubuchwepheshe besitsha sokuqala itholakala emakethe iminyaka engama-21. Le nkampani inikeza izixazululo zesoftware nezinsizakalo kubanikezeli bezinsizakalo abangaphezu kuka-450, ama-FLIs namabhizinisi emhlabeni jikelele ukudala izindawo ezingaphezu kwezingu-500.000, ezisebenzisa umthwalo obalulekile efwini.
1 Mayelana neVzLinux
2 Landa bese uthola i-VzLinux
Kuqokonyiswa lokho IVzLinux itholakala ngaphandle kwemingcele, imahhala futhi kusukela manje izothuthukiswa njengephrojekthi yomthombo ovulekile, ithuthukiswe ngokuhlanganyela komphakathi. Ukusatshalaliswa kuzoba nomjikelezo omude wesondlo, ohambelana nomjikelezo wokukhishwa kwesibuyekezo we-RHEL 8.
Isithombe sokufakwa okuhlongozwayo senzelwe ukufakwa kwi-hardware ejwayelekile, kepha ngokuzayo kuyashiwo lokho Izinhlobo ezimbili ezingeziwe ezilungiselelwe ukusetshenziswa ezitsheni nasemishinini ebonakalayo kuhlelwa ukukhishwa.
Ngasikhathi sinye, ukwakhiwa kwamanje sekuvele kufaka ama-plugins womsebenzi osebenza kahle ophethwe yi-Virtuozzo, OpenVZ ne-KVM hypervisors, kanye nezifanekiso zokuthunyelwa kuma-AWS, ama-Azure ne-GCP amafu system.
"Imakethe yokusabalalisa yeLinux yebhizinisi isuka kude namaseva aphethwe yi-CentOS aphethwe yi-CentOS ngenxa yokushona kwelanga okuhlelelwe ukusatshalaliswa ngasekupheleni konyaka," kusho uMaik Broemme, oyi-Virtuozzo Senior Product Manager. “Igebe elivelayo emakethe lidinga isixazululo esithembekile ngokuphila isikhathi eside, yingakho sikhethe ukwenza iVzLinux yethu itholakale esidlangalaleni. Inhloso yethu ukumane sinikeze imboni enye indlela yamahhala, esebenzayo ngamakhono wokuguqula angenamthungo. ”
Ngokudluliselwa okusheshayo ku-VzLinux yezixazululo ezikhona kusetshenziswa i-CentOS 8, insiza ekhethekile inikezwa esekela ukufuduka kwemishini ebonakalayo nezinhlelo ezifakwe kwi-hardware eyisisekelo. IVirtuozzo ibuye inikeze ukusebenza okungeziwe ukuhlinzeka izifinyezo ukubuyisa ushintsho uma kunezinkinga zokufuduka nokuzenzakalela ukudluliswa kweqembu leseva.
Esikhathini esizayo, kuhlelwe ukuhlinzeka ngomsebenzi wokufuduka usuka ku-CentOS 7, engeza umenzeli wezinhlelo zokulondoloza i-Acronis, bese uqala ukuthumela i-Virtuozzo Linux Enterprise Edition eyakha ngosekelo lwezohwebo namachashazi abukhoma akuvumela ukuthi ubuyekeze i-kernel ngaphandle kokuqalisa kabusha. Ngonyaka ozayo kuhlelwe ukwengeza ngokwengeziwe uhlelo lwezohwebo lweHoster Edition oluzosetshenziswa ezinhlelweni zokubamba.
Landa bese uthola i-VzLinux
Kulabo abanentshisekelo yokuthola i-VzLinux, kufanele bazi ukuthi inguqulo entsha engu-8.3-7 inikezwa ukulanda kanye nekhodi yomthombo yokwakha kabusha ukusatshalaliswa kanye namaphakeji weRed Hat Enterprise Linux 8.3.
Ukwakhiwa okunikezwayo kulungiselelwe ukwakhiwa kwe-x86_64 futhi kuza ngezinhlobo ezimbili: igcwele (4.2G) ne-compact (1.5G). Izithombe zohlelo lwe-OpenStack ne-Docker zilungiselelwe ngokwehlukana. I-VzLinux ihambisana ne-RHEL ngokuvumelana ngokugcwele kanambambili futhi ingasetshenziselwa ukubuyisela izixazululo ze-RHEL 8 ne-CentOS 8 ngaphandle komthungo.
Ekugcineni, uma unesifiso sokwazi okwengeziwe ngakho mayelana nokusatshalaliswa okusha kwe-Linux, ungabheka imininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Ukusatshalaliswa » IVzLinux, enye i-distro ethembisa ukuthi izothatha isikhundla esihle seCentOS